Ambohimangakely : Olona enina tao anaty fiara 4x4 indray maty nodonin’ny kamiao
Lozam-pifamoivoizana mahatsiravina no nitranga teny Ambohimangakely, ny sabotsy lasa teo. Fiara 4x4 mijanona an-tsisin-dalana, sady misintaka ny arabe, no nodonin’ny kamiao iray lehibe avy aty an-drenivohitra saika hiantsinanana.
Nandeha mafy niala ny fiara Citroen 2CV nijanona tamin’ny sisin-dalana ihany koa io fiara lehibe io, saingy tsy nahafehy ny familiana intsony. Nifatratra avy hatrany tany amin’ilay fiara tsy mataho-dalana izy, ka namono olona enina tamin’ireo fito tao anatin’ity farany. Ankizy kely iray sisa no velona, saingy mbola tsaboina eny amin’ny hopitaly. Fianakaviana avy namonjy mariazy teny amin’ny « Krypton » teny Ambohimalaza ireto niharan-doza ireto.
« Tokony ho tamin’ny 5 ora teo izahay no naheno feo nipoaka mafy. Rehefa nojerena dia fiara kamiao iray no nandona fiara Daihatsu 4x4. Taorian’io dia mbola nandona fiara Peugeot 205 sy Mazda ihany koa ilay kamiao nialoha ny nifatrarany tamin’ny andrinjiro », hoy ny mpivarotra iray teny akaikin’ny toerana nitrangan’ny loza.
Raha ny fitantaran’ireo olona hafa nanatri-maso ny fisehoan’ny loza dia somary nivoaka ny lohan’ilay fiara Citroen 2CV, izy nijanona an-tsisin’arabe io. Tsy lavitra fa nijanona teny ampitan-dalana kosa ilay fiara 4x4, mitodi-doha miakatra aty an-drenivohitra.
« Ny telo tamin’ireo olona tao anaty 4x4 dia maty teo no ho eo, ka mpivady ny roa miaraka amin’ny vinanton’izy ireo. Ny roa izay mpivady ihany koa dia maty teny an-dalana ho eny amin’ny hopitaly. Ny iray, izay ny mpamilin’ilay 4x4 ihany dia tsy nisy nahita raha tsy efa nosintonina ilay 4x4 ka hita tao ambany ny vatana mangatsiakany », hoy ny avy amin’ny zandarimariam-pirenena.